Qabxiilee 12 jaalala cimsan, jireenya midhaagsan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala Qabxiilee 12 jaalala cimsan, jireenya midhaagsan
Jireenyaa fooyyessuufi jaalala mi’eessuun heddu biratti waan haalaan hawwamu; hedduu barbaadamu. Akka salphatti garuu bira gahamaa? Miti, deebiin dhugaa. Garuu, jabaannee irratti hojjanne, xiyyeeffannaa guddaa itti laanne taanaan nidanda’ama, biras nigahama.
Qabxiilee kanniin altokkoon raawwachuun, aadaa godhachuun, waan salphaa miti. Jireenyaafi jaalala fooyyessuuf muranne taanaan, jecha murannoo jedhu jala naaf sararaa, torbaan tokko kana, isa dhufu kan biraa fudhannee irratti yoo hojjanne jaalala keenna nigabbisna, sukkaaraafi damma itti goona. Uummh!
Qabxiileen 12 kanniin asii gaditti tarreeffamaniidha. Har’uma irratti haa hojjannuu akka bu’aa jaalalaafi jireenya gammachuu gonfannu.
Dhageeffadhu, qajeelatti dhageeffadhu. Yaada hiriyyaa, waahila jireenyaa qalbiin dhageeffachuun gammachuudha. Bakka woliif kennuu agarsiisa, jaalala oduun osoo hintaane dalagaan mul’isa.
Qabxiilee gurguddaa irratti xiyyeeffadhu. Jireenyaa keessatti yeroo hunda injifachuun, gammachuu qofa hammaarachuun waanuma hinfakkaanne. Addaaddummaa, kufaatii fi rakkoo simudate laakkayuu dhiisii wantoota gaggaarii aragatte irratti fuulleffadhu.
Fedhii waahila/hiriyyaa keetii kankee irra aansi. Ufuntummaan hedduu keenna bira jirti. Egaa as biratti kan yeroo heddu gufuun gurguddoon nudhooftu, jaalala nuharkaa harcaaftu. Fedhii waahila kee dursisiisuun dirqama horiin qofa ta’aa hinqabu. Dubbii afaanitti qabuu dhabuun mataan isaa kabajaa fi kennaa guddaadha. Mallattoo fedhii isii ykn kan isaa dursisiisuu agarsiisa.
Waan hiriyyaan/waahilli kee godhu dinqisiifadhu. Kaleessa maqaa isaa ykn isii waan gaariin kaase hinjedhin… yoomuu faarsuu hindadhabin. Waan gaarii goonaan saahuu faarsi ,dinqisiifannaa kee mul’isi. Kana godhuun sitti hinulfaatin, dondhummaan sihinqabatin.
‘Ana’ jecha jedhutti dhimma bahi. Waan bade hundaaf quba namatti hinakeekin. ‘Ati’ kan jette, kana goote irraa gabaabbadhu. ‘Ana’ tti dhimma bahuun atis harka keessaa qabaachuu fudhadhu, dirqama qoodadhu.
Woldhabdee ykn garaagarummaa uumame hatattamaan furi. Rakkoo fi woldhabdeen wolirratti kuusame nidhooya, too’annaa keessaniin ala ta’a.
Yoo waan ammaa haasoftu waan dabre as hinfidin. Kan dabre dagadhuu, funduratti tankaarfadhu. Kan dabree hindeebistuu maaliif jiruu har’a booressitu?
Nama hingoggossin. Maaltu sitti dhagayama yoo namni sigoggossu, waanuma hintaaneen sammuu sidhukkubsu?
Waan haarawa hojjachuu yaali. Kuni humnaa fi anniisaa haarawa sigonfachiisa, dinqisiifannaa siif argamsiisa.
Waahila kee nama irratti hinqaanessin, maaqaa isaa ykn isiis bifa gadheen hinkaasin. Kana godhuun sixiqqeessa, namoota biraa tufii siif argamsiisa.
Dalagaa, firaa fi fedhii waahila kee hinxiqqeessin ykn hinarrabsin. Kana goonaan isin lamaanuu nibaddan, wolfudhattanii qilee buutan.
Waahila ykn hiriyyaa keetti hiniyyin. Iyyitee hininjifattu. Maaliif garuu kan gurra namaa duuchitu? Dhaabi. Adabatti deebi’i!
Gorsa kana hujii irra oolchaa; jiruu fi jaalala keessan har’umaa kaasaa mi’eessaa. Hiree gaarii!
Previous articleAmnesty International Itoophiyaan kan hidhaman akka gadilakkistu, mormitootas burkuteessuu akka dhaabdu gaafate
Next articleIndooneesiyaan dubartoonni poolisii ta’uu barbaadan qormaata dubrummaa dabrutu irraa eegama jetti